Xoghoose.com Iyo Warar Xaqiiqo Ah » Muxuu Ganaax Mudan Karaa Jose Mourinho Kadib Markii Casaan Loo Taagay Kulankii Southampton?Xoghoose.com Iyo Warar Xaqiiqo Ah
Muxuu Ganaax Mudan Karaa Jose Mourinho Kadib Markii Casaan Loo Taagay Kulankii Southampton?
Jose Mourinho ayaa ku adkeysanaya inuusan ogeyn sababta keentay in garsoore Craig Pawson ka saaro garoonka dhamaadkii kulankii Manchester United ay 1-0 kaga badisay Southampton.
Tababaraha reer Portugal ayaa wajahaya ganaax kaga yimaada xiriirka kubada cagta Ingariiska, ka dib markii laga ceyriyay garoonka kulankii Southampton.
Sky Sports News ayaa sheegeya in Mourinho shaki kaga jiro haddii uu ciqaab leeyahy kadib wixii ka dhacay garoonka, laakiin 54 jirkaan oo labo jeer FA-ga ganaxeen xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay ayaa ku doonaya inuusan qalad ku laheyn go,aankii loo saaray St Mary’s Stadium .
“Ma aqaan waxa la ii saaray,” ayuu u sheegay wariyaasha markii la weydiiyay inuu sharaxo sababta Pawson casaanka ugu taagay “Ma ogi, Craig ayaa ii sheegay inaan ka tago garoonka, waana ka tagay ayuu hadalkiisa ku daray.
Mourinho ayaa wajihi kara ganaax lacag kadib markii toddobaadkaan casaan u taagay garsoore Craig Pawson .
Bishii November sannadkii hore xiriirka FA-ga ayaa ganaax lacag iyo kulamo isugu jira dusha ka saaray tababare Mourinho kadib markii uun sameeyay qalad lamid ah kii looga saaray garoonka kulankii Southampton.